Saxanka xamuulka ee ABF wuu dhammaaday, warshadu waxay ballaarineysaa awoodda wax soo saarka - Nooca PCB, Been abuurka, Warshadda, Alaab -qeybiye, Soo -saare
PCB Joogtaynta Sare
Guddiga Imtixaanka IC
PCB Xawaare Sare
PCB -ga gaarka ah
» Blog » Saxanka xamuulka ee ABF wuu dhammaaday, warshadu waxay ballaarineysaa awoodda wax soo saarka
Saxanka xamuulka ee ABF wuu dhammaaday, warshadu waxay ballaarineysaa awoodda wax soo saarka
Iyada oo kororka 5g, AI iyo suuqyada xisaabinta oo aad u sarreeya, baahida loo qabo gudbiyaasha IC, gaar ahaan kuwa ABF, ayaa qarxay. Si kastaba ha ahaatee, awoodeeda kooban ee alaab -qeybiyeyaasha ay khuseyso awgeed, keenista gaadiidleyda ABF ayaa gabaabsi ah qiimuhuna wuu sii kordhayaa. Warshaduhu waxay filayaan in dhibaatada haysashada taargooyinka dhaadheer ee ABF ay sii socon karto ilaa 2023. Xaaladdan oo kale, afar warshadood oo xamuul ah oo waaweyn oo ku yaal Taiwan, Xinxing, Nandian, jingshuo iyo Zhending, ayaa bilaabay qorshayaasha ballaarinta rarka saxanka ABF sannadkan, oo leh wadarta kharashaadka raasumaalka ee ka badan NT $ 65 bilyan ee dhul -weynaha iyo dhirta Taiwan. Intaa waxaa dheer, ibiden iyo shinko ee Japan, matoorka Samsung ee Kuuriyada Koonfureed iyo elektaroonigga Dade ayaa sii ballaadhiyay maalgashigooda taarikada sidayaasha ABF.
Baahida iyo sicirka guddiyada ABF ayaa si aad ah kor ugu kacay, waxaana laga yaabaa in yaraanta ay sii socoto ilaa 2023
Sub substrate IC waxaa lagu saleeyay guddiga HDI (guddiga wareegga isku-xirnaanta cufnaanta sare), kaas oo leh astaamaha cufnaanta sare, saxnaanta sare, yareynta iyo dhuubnaanta. Maaddaama ay tahay sheyga dhexe ee isku xiraya chip-ka iyo guddiga wareegga ee geedi-socodka baakadka chip-ka, shaqada ugu weyn ee guddiga side ABF waa in la fuliyo cufnaanta sare iyo isgaarsiinta isku-xirnaanta-xawaaraha sare leh ee jibbadda, ka dibna lagu xiro guddiga weyn ee PCB iyada oo loo marayo khadad badan on IC side board, oo ciyaara doorka isku xirka, si loo ilaaliyo hufnaanta wareegga, loo yareeyo baxsiga, loo hagaajiyo booska xarriiqa Waxay ku habboon tahay in si fiican loo kala firdhiyo kuleylka si loo ilaaliyo jajabka, oo xitaa la geliyo dadban oo firfircoon qalabka si loo gaaro shaqooyinka nidaamka qaarkood.
Waqtigan xaadirka ah, xagga baakadaha dhammaadka-sare leh, IC side wuxuu noqday qayb lama huraan ah oo ka mid ah baakadaha chip-ka. Xogtu waxay muujineysaa in hadda, saamiga IC side ee guud ahaan kharashka baakadaha uu gaaray qiyaastii 40%.
Ka mid ah sidayaasha IC, waxaa inta badan jira ABF (Ajinomoto build up film) sidayaal iyo BT sidayaal marka loo eego dariiqyada farsamo ee kala duwan sida nidaamka cusbi CLL.
Waxaa ka mid ah, gudiga xammuulka ABF waxaa inta badan loo adeegsadaa jajabyada xisaabinta sare sida CPU, GPU, FPGA iyo ASIC. Ka dib marka la soo saaro jajabyadaan, waxay badanaa u baahan yihiin in lagu xiro baakadda ABF ka hor inta aan lagu soo ururin guddiga sare ee PCB. Markay wadaha ABF -du dhammaato, soo -saareyaasha waaweyn oo ay ku jiraan Intel iyo AMD kama baxsan karaan qaddarka ah inaan guntiga la geyn karin. Muhiimadda wadaha ABF waa la arki karaa.
Tan iyo qeybtii labaad ee sanadkii la soo dhaafay, iyada oo ay ugu wacan tahay kororka 5g, daruuraha AI ee xisaabinta, server-yada iyo suuqyada kale, baahida loo qabo jajabyada xisaabinta waxqabadka sare (HPC) ayaa si aad ah u kordhay. Iyada oo ay weheliso kororka baahida suuqa ee xafiiska / madadaalada, baabuurta iyo suuqyada kale, baahida loo qabo CPU, GPU iyo chips -ka AI ee dhinaca terminaalka ayaa aad u kordhay, taas oo sidoo kale kor u qaadday baahida looxyada gudbiyaha ABF.
Category Blog (676) Macluumaadka Shirkadda (2) Alaabta (112) FR-4 PCB (21) HDI PCB (14) PCB Xawaare Sare (5) Substrate IC (13) BGA (6) eMMc (1) Mini LED (2) SiP (1) Guddiga Imtixaanka IC (4) Microwave PCB (29) PCB Joogtaynta Sare (26) Rogers PCB (18) Taconic PCB (1) Telfon PCB (5) PCB-lakabka badan (18) Golaha PCB (12) PCB Flex Rigid (15) PCB -ga gaarka ah (11)